Istaatistikada Caalamiga ah ee Farriinta Qoraalka | Martech Zone
Istaatistikada Caalamiga ah ee Fariimaha qoraalka
Isniin, Oktoobar 17, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Adam Yar
Waxaa jira 4.2 bilyan oo isticmaaleyaal ah oo adeegsada farriimaha qoraalka adduunka oo dhan…. taasi waa 3 ka mid ah 4tii qof ee Dunida ku nool! Waxay sidoo kale ka dhigeysaa farriinta qoraalka adeegga 1 ee ugu isticmaalka badan adduunka iyadoo la adeegsanayo 6.1 tiriliyan tiriliyan tweets sanadkii hore. Xaqiiqdii 48 milyan oo qof ayaa haysta taleefannada gacanta… laakiin MAYA koronto, inta badanna waxay u isticmaalaan baytariyada baabuurtooda si ay ugu soo shubaan taleefannadooda. Kordhinta ballaaran ee taleefannada casriga ah ee Mareykanka, dad badan ayaa iska fogeeya farriinta qoraalka laakiin waa kaliya tikniyoolajiyadda guud ee ka dhexeysa taleefannada oo dhan suuqa (ka baxsan wicitaanka dhab ahaan).
Ha diidin awoodda farriinta qoraalka - waxaan macaamiil ku leenahay bartayada madal suuq geynta guryaha iibiya guryo badan oo isticmaalaya farriimaha qoraalka oo qayb ka ah isku dhafka warbaahinta. Sidoo kale, waxaan leenahay makhaayado waaweyn oo dadka ku kaxeeya albaabadooda iyagoo adeegsanaya farriimo qoraal ah. Doug xitaa wuxuu adeegsadaa farriinta qoraalka intuu hadlayo… wuxuu lahaa a 24% sicirka jawaabta hal khudbad, isagoo ka qaybgalayaasha weydiinaya inay qoraalka MKTG u dir 71813 si loogu qoro joornaalkiisa.
Xogtan waxaa noo keenay MBA khadka tooska ah
Kordhi taraafikada adoo ku wanaajinaya Times Times
Saamaynta Deegaanka ee SPAM